Abavelisi beemveliso kunye neFektri - Abavelisi beemveliso zase China
Ifayile engenanto i-hemodialyzer (ukuhamba okuphezulu)
Kwi-hemodialysis, i-dialyzer isebenza njengezintso ezingezizo kwaye ithathe indawo yemisebenzi ebalulekileyo yelungu lendalo.
Igazi lihamba phakathi kwama-20,000 eentsinga ezibalaseleyo, ezaziwa njengee-capillaries, ezidityaniswe kwityhubhu yeplastiki emalunga neesentimitha ezingama-30 ubude.
Ii-capillaries zenziwe ngePolysulfone (PS) okanye iPolyethersulfone (PES), iplastikhi ekhethekileyo enokucoca okungafaniyo kunye neempawu zokuhambelana kwehemmo.
Ama-pores kwii-capillaries ahluza i-toxin ye-metabolic kunye namanzi amaninzi avela egazini aze awakhuphe ngaphandle komzimba nge-dialysis fluid.
Iiseli zegazi kunye neeproteni ezibalulekileyo zihlala egazini. I-Dialyzers zisetyenziswa kube kanye kuphela kumazwe ahambele phambili kwezoqoqosho.
Ukusetyenziswa kwe-fiber ye-fiber hemodialyzer enokulahlwa inokwahlulahlulwa kube ngamacandelo amabini: High Flux kunye ne-Low Flux.
Ifayile engenanto i-hemodialyzer (ukuhamba okuphantsi)
Iifilitha ze-dialysate ze-Ultrapure zisetyenziselwa ukuhluza ibacteria kunye nepyrogen
Isetyenziswe ngokudibeneyo nesixhobo se-hemodialysis esiveliswe nguFresenius
Umgaqo osebenzayo kukuxhasa inwebu yefayibha engenamsebenzi wokulungisa i-dialysate
Isixhobo seHemodialysis kwaye silungiselele i-dialysate iyahlangabezana neemfuno.
I-Dialysate kufuneka itshintshwe emva kweeveki ezili-12 okanye unyango lwe-100.
Imijikelezo eSterile Hemodialysis yoSetyenziso oluNye inxibelelana ngqo negazi lesigulana kwaye isetyenziswe ixesha elifutshane leeyure ezintlanu. Le mveliso isetyenziswa eklinikhi, kunye nedialyzer kunye nedialyzer, kunye nemisebenzi njengejelo legazi kunyango lwe-hemodialysis. Umthambo wegazi okhatshwa ligazi ukhupha igazi lesigulana emzimbeni, kwaye isekethe yemithambo ibuyisela igazi "elinyangiweyo" kwisigulana.
Ukucoceka okuphezulu, kungavumi.
Imveliso esemgangathweni yebanga lezonyango, ulawulo olungqongqo lwebhakteria, i-endotoxin kunye nomxholo wesinyithi onzima, ukunciphisa ngempumelelo ukudumba kwe-dialysis
Umgangatho ozinzileyo, uxinzelelo oluchanekileyo lwe-electrolyte, ukuqinisekisa ukhuseleko lokusetyenziswa kweklinikhi kunye nokuphucula kakhulu umgangatho we-dialysis.
Isirinji engenazintsholongwane isetyenziswe kumaziko onyango ekhaya nakwamanye amazwe amashumi eminyaka. Yimveliso eqolileyo esetyenziswa ngokubanzi kwisitofu esingaphantsi kwesikhumba, efakwa ngaphakathi nakwimisipha kwizigulana ezinyangayo.
Saqala ukuphanda kunye nokuphuhlisa iSirinji yeSterile yoSetyenziso Olunye ngo-1999 saza sagqitha isiqinisekiso se-CE okokuqala ngo-Okthobha u-1999. Imveliso itywinwe kwiphakheji enye yomaleko kwaye yenziwa inzalo yi-ethylene oxide ngaphambi kokuba ikhutshwe kumzi-mveliso. Yokusetyenziselwa into enye kwaye inzalo isebenza iminyaka emithathu ukuya kwemihlanu.
Olona phawu lukhulu yiDosi ehleliweyo
Isixhobo sokudibanisa uxinzelelo esingenasiphelo sinomsebenzi wokuhamba phambili endaweni yetyhubhu yoxinzelelo yokutywina, ngokuthintela ukubuyela umva kwegazi, ukunciphisa ukubhloka kwecatheter kunye nokuthintela iingxaki zokufakwa ngaphakathi njengephlebitis.
Ingqondo ebandayo yezixhobo zokusebenzisa isisombululo esinye
Olu luhlu lweemveliso lusetyenziselwa ukupholisa igazi, ukubanda kwesisombululo se-cardioplegic kunye negazi elingena-oxygen ngexesha lokusebenza kwentliziyo phantsi kwembono ngqo.
Ipakethe yecatheter esembindini
IIMPAWU ZOKUGQIBELA: 7RF (14Ga) 、 8RF (12Ga)
IIMPUMELELO EZIBINI: 6.5RF (18Ga.18Ga) kunye ne-12RF (12Ga.12Ga) ……
AMANQAKU AMATHATHU: 12RF (16Ga.12Ga.12Ga)
Iseti yotofelo lwegazi esetyenziswayo isetyenziselwa ukuhambisa igazi elilinganisiweyo nelilawulwayo kwisigulana. Yenziwe ngegumbi eline-cylindrical drip kwigumbi kunye / nangaphandle kokubonelela ngesihluzi ukuthintela ukudlula kwalo naliphi na ihlwili kwisigulana.
1. I-tubing ethambileyo, ine-elasticity elungileyo, ukucaca okuphezulu, anti-jiko.
2. Igumbi lokudropha elicacileyo elinesihluzi
3. Oyinyumba ngegesi ye-EO
4. Umhlaba oza kusetyenziswa: ukufakela igazi okanye izinto zegazi eklinikhi.
5. Iimodeli ezizodwa xa ziceliwe
6. I-lateate yasimahla / i-DEHP yasimahla
I-IV catheter infusion iseti
Unyango lokumnika lukhuselekile kwaye lukhululekile